Wararka - Talooyin lagu yareynayo korantada joogtada ah ee dhididka
Tilmaamo si loo yareeyo korantada joogtada ah ee dhididka
Markaad xiraneyso oo iska siibayso funaanadda, markaad taabato dadka kale, ama aad si shil ah u taabato walxaha birta ah, badanaa si lama filaan ah ayaa loo sii daayaa. Xitaa waxaad ku arki kartaa dhimbilo koronto hawada ku jira. Kaliya ma aha gacmahaagu inay dhaawacmaan, laakiin sidoo kale korantada joogtada ah iyo dheecaanku waxay saameyn ku yeelan doonaan shaqadaada caadiga ah iyo noloshaada.
Dhididku waxay u nugul yihiin korantada ma guurtada ah, maxaa yeelay maqaarkayaga, dharka kale iyo dhididkayadu way is taabtaan oo ay is xoqaan, gaar ahaan marka la gashanayo ama la bixinayo dharka, korantada ma guurtada ah ayaa si tartiib tartiib ah isu soo uruurisa. Markuu heer sare ku ururana, hal mar baa la sii deyn doonaa, dheecaanna waa dhici doonaa.
Tirtir korantada ma guurtada ah ee lagu soo saaray dhididka: Kahor intaadan xirin oo aadan iska bixin surwaalka, isticmaal shay bir ah si aad u taabato funaanadda. Ama xiro gogol bir ah si aad u qabato koronto joogto ah oo uu qaado funaanadda.
Ka fogow xirashada funaanadaha ka sameysan fiilooyinka kiimikada, maxaa yeelay khilaafka u dhexeeya fiilooyinka kiimikada iyo jirkaaga waxay u badan tahay inuu dhaliyo koronto joogto ah. Xidho kabaha maqaarka in ka badan kabaha caagga ah, maxaa yeelay qalabka cinjirka ayaa ka hortagaya gudbinta kharashka korantada, taasoo horseedaysa isku-darka kharashka korantada.
Yaree jiilka korantada ma guurtada ah ee dhididka: soo iibso jilciyaha ama timaha lagu buufiyo kuna buufi dhidid si aad uga hortagto korantada ma guurtada ah. Sababtoo ah jilciyaha ayaa kordhin kara qoyaanka dhididka, iyo buufinta timaha waxay yareyn kartaa korantada ma guurto. Ama isticmaal shukumaan si sax ah biyo loogu buufiyey oo biyo qoyan ku tirtiray funaanadda. Qoyaan funaanada wax yar si loo yareeyo heerka qallaylka ee funaanada isla markaana la yareeyo jiilka korantada ma guurto ah.
Hagaaji habka loo dhaqo funaanadaha: ku dar soodhaha, khalka cad ama jilciyaha markaad dhaqeysid funaanadaha. Waxay jilcin kartaa dharka, yareyn kartaa qallaylka qalabka, waxayna gacan ka geysan kartaa yareynta korantada ma guurtada ah.
Kordhi qoyaanka deegaanka: Marka cimiladu qallajiso, lacagta korantada ee la ururiyey si fudud looguma wareejiyo hawada. Waxaad u isticmaali kartaa huureeye si aad u kordhiso qoyaanka hawada, ama ku dul dhig shukumaan qoyan ama galaas biyo ah kululeeyaha si aad u yeelato saameyn la mid ah.
Sifee maqaarka: U mari kareemka qoyaanka meelaha maqaarka ee taabashada dhididka ama timaha si fudud u nuugaya iyo warqado khafiif ah. Ma aha oo kaliya maqaarka in la ilaalin karo xilliga jiilaalka ee qalalan, laakiin xitaa haddii maqaarka la saliiday uu xiriir la leeyahay walxaha funaanadda, ma fududa in la soo saaro koronto joogto ah.
Waqtiga boostada: Meey-07-2021